Caleen moodada naqshadeynta caleenta daabacaadda caag ah oo loogu talagalay qolka fadhiga, Shiinaha Caleen moodada ah naqshadeynta caag daabac leh oo loogu talagalay qolka fadhiga Soosaarayaasha, Alaab-qeybiyeyaasha, Warshad - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
Number Model: 8685
Material Waxyaabaha Wanaagsan: Fasalka Semi Sheer Fabric oo Xaalad tollanimo Wanaagsan, Lagu Nadiifiyey oo u jilicsan Taabashada.
D UJEEDDO GAAR AH: Dahabyo jilicsan oo shaashad leh oo xarrago fudud leh iyo qaab buul jilicsan oo qurux badan laakiin qaab quruxsan ku dara qolkaaga, u samee muuqaal quruxsan oo jilicsan oo casri ah dariishadahaaga.
IL SIFAYNTA IFTIGA: Daahyada daahyada ah ee caleenta daabacan waxay siinayaan iftiin, jacayl iyo hawo qol leh iyagoo u oggolaanaya qoraxda jilicsan ee qorraxdu inay dhex marto iyadoo la siinayo wax qarsoodi ah.
● SERVE WELL: Waxaa lagu heli karaa cabirro iyo midabyo kala duwan, oo ku habboon qolka jiifka, qolka fadhiga, qolka cuntada, qolka dhallaanka, qolka carruurta, xannaanada carruurta, xafiiska, hudheelka ama meel kale oo dadweyne.
SAHLI KU DARSIGA & DARYEELKA: 3 ”Jeebka usha waa u fududahay in lagu laalaado ul ama daah daah qurxin ah. Mashiinka waxaa lagu dhaqi karaa biyo qabow, wareeg tartiib tartiib tartiib tartiib ah u qallalan. Birta qabow haddii loo baahdo.
Product Name Caleen moodada naqshadeynta daabacaadda dharka caag ah oo loogu talagalay qolka fadhiga